Olee otú m Echefuola na fọrọ nke nta 200 Bitcoin trading a n'ọnwa gara aga - Blockchain News
Olee otú m Echefuola na fọrọ nke nta 200 Bitcoin trading a n'ọnwa gara aga
An akụzi akụkọ site Reddit, bụ ndị chọrọ ịnọgide na-amaghị aha.
Ya mere, ogologo akụkọ mkpụmkpụ, M malitere erekwa a afọ gara aga, a na oke ochucho dum na-agba ọsọ site na 1k ka 19k ( mgbe ụfọdụ na-emechi n'elu, mgbe ụfọdụ na-emechi kwa n'oge ma ọ bụ akaha, ma mgbe nile na-eme ka uru)
m tụgharịa 3 enweghị ka ọ hà BTC nke m nwere si akpọ egosighị mmetụta (n'oge 3k) n'ime ihe fọrọ nke nta 200 BTC nke fọrọ nke nta 4 nde ke n'elu na ga-abụ 2 nde ugbu a ahịa.
Echere m na m bụ a trading amamihe, a chi, ihe ọ bụla. agbanyeghị, nke a bụ ebe mwute amalite.
Mgbe dump si 19k na 11k m gara ogologo na ala, ma na-na-agbakwụnye na m ọnọdụ na ibiaghachi na 12k 13k, 14k. mgbe, na 16k nwụrụ anwụ cat, m ọnọdụ bụ a n'ihu 100 BTC na uru. Kama emechi mgbe na-enwe a ngụkọta 300 BTC, M ụba leverage na ụba m ọnọdụ size. Nke a dum ọnọdụ e liquadated na dobe azụ 12k, n'ihi na m na ntinye kpaliri elu nke ukwuu. Emere m mmeri 100 BTC akwụkwọ uru na ihe fọrọ nke nta 50 BTC oke. M devasted, na ala 150 BTC ngụkọta.
Mgbe eleru ọnọdụ, M wee kwuo na mgbapụta 16k onye nwụrụ anwụ cat na na anyị na-aga ala. Ya mere, m shorted. na 12k. Tụkwasị na 13k. Tụkwasị na 14 na 15k. Ọkọdọ liquidated na elu na 17k. ọzọ 50 BTC ọnwụ. Down ka 100.
na-eche, ok anyị mere a elu elu na 17k, uptrend azụ. wee ogologo. Ọkọdọ liquidated na 13k.
50 BTC ekpe. bibiri, ejighị n'aka na, dịghị enyere anyị aka ịmata whats na-aga. Nọdụ site na dobe ka 9k, mgbe anyị na bounced m chere ọ pụrụ ịbụ na ala. Inweta na 11500, egwu emechi 10500. Mgbe anyị gara 13k m agba onwe m n'ihi na egwu mmechi, wee ogologo na 12800.
Liquidated a ụtụtụ maka ikpeazụ m bitcoin.
N'oge a na m ka na-na ujo, ikpeazụ ọnwa ole na ole Ive leghaara anya mmekọrịta na akwụkwọ, na Ive e ịmụ anya arọ nrọ banyere ibi ndụ na-elu ndụ ọgaranya dị fuck na m na ọtụtụ nde.
ugbu a, M enweghị ebe.
Ikenye a ka ndị ọzọ na Na chaa chaa pụọ ​​ndụ na-agbanwe agbanwe ego. Na chọrọ onyinye ma ọ bụ Atụmatụ bụghị ikenye adreesị Na PM m. Ọ dịghị mgbe m chọrọ ịnụ okwu BTC ọzọ n'ihi na m chọrọ ichefu
gypsytoy M na-adịghị ka ihe a ga-abịa azụ. M ihu ọma nwere otu akụkọ dị ka OP ma e wezụga na m si etinye ihe niile m nwere (dị ka a akwụkwọ kọleji) ịzụta 60 BTC na 2013 na-ejide ike a siri ike 4 afọ. Mgbe ahụ na-enwe a echiche ike nsogbu n'oge 2016 ma na-enye 20 BTC pụọ na-amabughị online onye wee uru nke m, mgbe na-hụrụ ọzọ. Ekem, ke December, ụbọchị tupu n'elu, M mụtara ihe oke trading n'ezie bụ. Mad a obere bit. Echefuola na a ezigbo ego mgbe ụra n'oge a dobe na mgbe na-achụ dum ihe (40 BTC) ala 0.02 BTC.
M na-apụghị bibiri. Obi m siri ike na m na-aga na-akwụsị ndụ m nke a na m na-ama malitere ikewapụ onwe m si ụwa ma na-m na-eme iji. M na-eche weird ekpughe na kweta a na Reddit, ma nke a na post akụrisị home, dịkwa ka ọ dị otu n'ime ndị isi sub banyere Ihọd nne bụ ndị gburu onwe ya otu ọnọdụ.
M na-enwe mmasị ndị pụrụ ịnagide ihe ndọghachi azụ nke ụdị ma m na otu n'ime ha. M maara site na nkeji m na-agụ-acha ọcha akwụkwọ na Bitcoin bụ a egwuregwu na-agbanwe agbanwe echiche. M wụsara m ego n'ime ya, obi ike na m tojupụtara ga-ekwesị a nde (20K) n'ime 5 afọ (M na-akpọ nke a fọrọ nke nta zuru okè). Ọ na-adịghị ọbụna na-amasị m na-achọ ka ọ na-emezu oké ndụ, M nnọọ chọrọ ka obi na-akpata ego mma n'ihi na ozugbo ná ndụ m na chọrọ ịkọrọ ụba na ndị nso m na aka rụọ mma ulo oru na a mma ụwa. The mgbapụta na dumpers na Lamborghini memes bụ otú asọ anyị oyi, dị ka ma ọ bụrụ na ụwa kwesịrị ọ bụla ọzọ enweghị uche hedonistic azụ. M na-eto mara mma ogbenye na bounced si nkuchi home azụlite n'ụlọ na akwụkwọ akwụkwọ. M ejisike mere ya site na mahadum na enweghị marketable nkà. M nwụnahụrụ m nwụrụ anwụ ọgwụgwụ ahịa ọrụ a ọnwa ole na ole azụ na ike adịghị m na-aga azụ sonso na-Buy. M ẹkenịmde ike ofụri afọ, ezie na m nwere ike na-na na na-na-eji ego mgbe ụfọdụ. Mgbe m na-wetara m nri ehihie na-arụ ọrụ na mgbe nile na ụzọ ụgbọ oloko mgbe m nwere ike kama na-akwụ ụgwọ maka über. M nyekwara a puku ole na ole dollar azụ na 2013 na mgbe hụrụ a penny nke ya. OP bụ ihe ndị ọzọ na-asọpụrụ karịa m n'ihi na m na-na-adịghị onwe-akwanyere gbatuo onyinye ma m na-mara mma n'aka na ndị mmadụ na-adịghị inye onyinye na obere agha ndị na-na otu ọnọdụ na m doro anya na mechaa 't kwesịrị ya na agbanyeghị. Mgbe m na-agba ọsọ n'ime enyi, ha mgbe niile na-ajụ banyere otú ọma m ga-eme n'ihi na ha maara na m na na na a Bitcoin Nkwado maka a ogologo oge. Ịmụmụ ọnụ ọchị na-ele ha anya mgbe na-ekwu okwu ọma banyere Bitcoin bụ incredibly-agwụ ike na m ozugbo chọrọ otutu elu na kacha nso ahịhịa nwere ike e mesịa.
M maara ebe ọzọ dị n'eluigwe na ụwa, e nwere ihe a 'm’ ndị kpebiri megide oke trading ma ọ bụ kwụsịchaa mgbe a ole na ole losses ma ọ bụ na-amalite na-akpọ oké ehi na mmalite nke a bear ahịa. Ọ bụghị m bụ ezie na, M a nzuzu na m mikpuru naanị ihe aga m na ndụ. M na-atụ ndị ọzọ na-aṅa ntị n'ịdọ aka ná ntị, ma m maara na ọtụtụ agaghị. Nke ọ bụla, M na-adịghị na ụdị nke uche ka ihe dị ka nke a na-aga na m enweghị ike iguzo na-ekiri Bitcoin ọnwa ọzọ na-hapụrụ. Ọ bụ mwute na ego nwere ike nwere ike dị otú ahụ ga-achị ndị. Amaara m ọtụtụ nwere ndụ ha gbanwere nnọọ ka mma ma m chere na e nwere abụọ n'akụkụ mkpụrụ ego.
M na-adịghị ọbụna mara ihe mere m ka na-ịna-echegbu n'elu Bitcoin na a sub. M nkịtị nwere ike na-eche nke ihe ọ bụla ọzọ ọtụtụ ndị oge. Echere m na m na-enwe olileanya na ọ ga-dobe ụfọdụ nnọọ ala ego nakwa na m ga-enwe ike ịzụta n'ime ya ma na-adịghị eme ka uche n'ihi na m na-adịghị $10 aha m na-etinye azụ na. M na-aga ida m na-enweghị ọrụ uru na ụlọ na a ọnwa ole na ole na n'ezie enweghị ebe ọ bụla na-atụgharị otu ugboro na-eme.
M mara ọtụtụ ndị mmadụ ga-sere onwe ha elu site ha bootstraps na-ebu on ma m maara na m nwere ike mgbe agbanahụ uche m. Ndo ka rant ezighị gị obiọma na-atụgharị uche comment. M na-achọ OP ndị kasị mma na o yiri ka ọ nwere a ka mma àgwà kwupụta gbakee karịa m, ọbụna na stakes ịbụ na nnọọ elu.
edit: M ukwuu n'ime akwa ụta ikenye a. M ụdị kwubiri na ọ ga na-eli, na-aghọta na a na eri ka mara mma arụsi ọrụ ike na na m gwa n'elu comment. Daalụ maka comments, PMS na ụdị okwu. M na na na ozugbo n'ihe ize ndụ nke ihe ọ bụla na-adịghị agbalị na-amalite a ọmịiko party onwe m. Otú o sina dị, na-ekele unu niile ka na-echegbu gị.
JungleSumTimes M na e. Echefuola m alaeze ya nile 10 afọ ndị gara aga. Back to square otu. Ị ga-ilu na iwe maka awhile. Gbalịa a mgbanwe nke mma. A mgbanwe nke ohere.
Dị nnọọ ịmụta inwe ekele maka ihe ị na-eme nwere. Ka nwere anya gị? Aka gị na-arụ ọrụ? Ị ọma na-agwa njakịrị? The isi. Daalụ gị mgbe-n'anya kpakpando n'elu maka ihe ndị a.
N'ihi na inwe ego ma ọ bụ enweghị ọ bụla ego anaghị n'ezie ịgbanwe WHO ị na-. Na-arụ ọrụ na na Ihọd. Nye ya ụfọdụ slack. Ị ga-azụ. Dị nnọọ na-ewe oge na a ọtụtụ na-agbaghara onwe gị.
Rabbit0123 Ọ na-aga na-ok.
E nwere otu akụkọ banyere otu Chinese Ihọd onye nwere a mara mma ịnyịnya na onye ọ bụla bụ na-ekwo ekworo banyere ya, si dị ka "Dude ị na-ọgaranya". Ọ na-amụmụ ọnụ ọchị ma na-aza "haha anyị ga-ahụ". Ụfọdụ ebe ọ gbaara ọsọ n'ọhịa, ya mere ndị mmadụ na-asị na "oh ị bụ nri, ọ na-arahụ na ị na-eme nwoke !". Ọ zara ya, "Anyị ga-ahụ". Na ole na ole ọnwa ịnyịnya wee laghachi na ụfọdụ ndị ọzọ inyinya – ụmụ nwoke ọ hụrụ n'ime ohia. Ndị mmadụ nọ na n'ijuanya "ha ha ugbu a na ị onye kasị baa ọgaranya n'ime obodo, kwesịrị ịbụ otú obi ụtọ!". Ọ na-aza "na anyị ga-ahụ" ugboro. Nwa-ya mgbe na-agbalị na-agba ịnyịnya ọhịa inyinya dara ma nyawaa ya ụkwụ… nke bụ a dị nnọọ njọ ọnọdụ ochie China . "Oh a niile akụ na ụba ghọrọ a ọnụ". "Anyị ga ahụ!". Na a di na nwunye nke moths na Chinese eze ukwu malitere agha were niile ike ụmụ nwoke si obodo, ma e wezụga onye nwere a gbajiri ụkwụ N'ezie. Ndị mmadụ nọ na bibiri. "Oh otú nri na ị bụ agadi nwoke , ugbu a, anyị nwere ihe ọ bụla, anyị hụrụ n'anya Ụmụ na-arahụ na-alụ ọgụ na a nzuzu agha, i wee na-gị ịnyịnya na nwa gị !". Maa ihe ọ zara!
Ọ bụ nnọọ n'ọnọdụ ọjọọ na anyị niile nọ n'ebe a ịkọrọ gị mgbu na ahụhụ na. Ihe dị mkpa na-echeta ezie bụ na ị na-efu nanị ole na ole BTC, na ndụ abụghị naanị acha ọkụ ma ọ bụghị naanị okwu nlelị, ọ bụ a mix nke ma. Ọ bụ n'ezie na gị ike inweta kwa obi ụtọ na acha ọkụ na oke bibiri na okwu nlelị mee ihe, mgbe otu e nwere ndị ọzọ na-esonụ , anọ na-emeghe.
Ọ na-aga na we Dude, ọ bụ dịkwa mma ọbụna ugbu a. Ị ga-ahụ.
gypsytoy ekele, nwoke. Nke ahụ bụ n'ezie a mara mma gbara ọkpụrụkpụ akụkọ ifo na m nụrụ ya n'ihu. Ọ bụ eziokwu na ihe na-mgbe na-agbanwe agbanwe n'ihi na mma ma ọ bụ njọ ma e nwere N'ezie, ọtụtụ ihe na-ebi ndụ maka, i dị nnọọ mara na ọ ga-siri ike ma ọ bụ na apụghị m ahapụ a dum gbakee. My obi na-ama mmekpọ ọnụ m na ugbu a, ọ nwere a ụyọkọ ọzọ mmanụ ụgbọala na-eme otú.
Daalụ ọzọ, M na-ewere ndị a kwuru na obi.
doc_samson Ọ bụrụ na ị na-amasị na akụkọ ị pụrụ ịnụ ụtọ na-agụ akwụkwọ ụfọdụ na Zen. E nwere otu akpan akpan, ike na-echeta aha-ya, ma, ọ bụ nnọọ obere ma nnọọ oké na dị nnọọ nwere otu ilu na ibe ọ bụla ma ọ bụ abụọ. Karịsịa ụfọdụ Zen akwụkwọ on warrior spirit. Ọtụtụ ihe na-amasị na-anabata ọnwụ otú i nwere ike n'ezie na-ebi ndụ kwa ụbọchị iji ya n'ụzọ kwekọrọ nnọọ, etc.
Ọzọkwa Tao TE Ching na Chinese na nkà ihe ọmụma akwụkwọ. Ma eleghị anya, ụfọdụ okpukpe Buddha.
Na Marcus Arelius’ eche n'echiche, nza nke Stoicism nke dị yiri nnọọ Zen.
Ọnwụ-amụmụ ọnụ ọchị na anyị niile, ma ihe niile a nwoke nwere ike ime bụ ọchị azụ.
Ị nwere ike karịrị uche gị – bụghị n'èzí ihe. -aghọta nke a, na ị ga-ahụ ike.
The obi ụtọ nke ndụ gị dabeere na àgwà nke gị echiche.
Ọ bụrụ na ị na-ewute ihe ọ bụla mpụga, mgbu abụghị n'ihi na ihe ya onwe ya, ma gị atụmatụ nke ya; na a na i nwere ike kagbuo n'oge ọ bụla.
Fontas Gị na mbụ uba, mere na efu. M na na na n'ebe ahụ.
E nwere naanị abụọ. Bụ nke a niile chioma, ọ bụ nkà?
Ọ bụrụ na ọ bụ chi, mgbe ahụ ị nwere unbelievable n'abalị cha cha, ma ọ dịghị mgbe cashed si. Na njedebe ulo ndibọhọ, ka ha na-eme mgbe niile. Etinye ya n'azụ gị, ka a meme banyere ya, na ọ bụ a akụkọ na-agwa na Ogwe. The-acha anụnụ anụnụ Erere.
Ọ bụrụ na ọ bụ nkà, ị na-ewere na-acha uhie uhie Erere. Kpọkọtanụ ọzọ 3k, na-eme ya nile ọzọ. Dị nnọọ ikwugharị ihe i mere n'oge gara aga afọ – n'ezie, ọ ga-adị mfe na ngwa ngwa na nke abụọ oge gburugburu. Ị na-na na a afọ n'azụ, na eme nzuzu, ma ị ga-ejedebe na-eme ka ọ niile azụ na ndị ọzọ. nke ahụ bụ, ma ọ bụrụ na gị na atụmatụ bụ n'ezie ụda.
Ọtụtụ ndị bụ ndị na-na-atụfu mbụ ha uba mgbe agbalị ọzọ, na agaghị achọpụta ma ọ bụrụ na ọ bụ chi ma ọ bụ nkà.
M bịara jumping na oke bekee oghere mgbe adịkwa mbụ m trading uba. Best mkpebi nke ndụ m. My abụọ bịara ọbụna ngwa ngwa karịa ndị nke mbụ, na bụ ọtụtụ ibu – mbụ echekwara iyi miniscule ugbu a.
Ọ dịzịrị gị, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ otú miri emi gị oke bekee oghere aga.
zksnugsM na-aghọta ihe mgbu gị. M n'ezie ime.
Mgbe ụfọdụ m chọrọ ka m mgbe wee mara nke kaadị. Ọ bụ ma a ngọzi na nkọcha. A ngọzi n'ihi na i nwere ike inwe 'ara gainzz', ma n'otu oge, ị na-tọrọ atọ na a eerie ụwa, ebe uche gị na-awagharị ka echiche dị ka otú ị pụrụ ịla ezumike nká a nde ma ọ bụrụ na ị na-ere n'oge / mere na-ezighị ezi na ahia / zụta na mbụ etc. Echeghị m na anyị nwere ike mgbe agbanahụ a. Dị ka ogologo oge dị ka anyị na-ebi anyị ga-ruo mgbe ebighị ebi ga-abụ ohu ndị a echiche, nke ga-mgbe niile na-azụ nsogbu n'obi mgbe niile anyị ihe anyị nwere ike 'eme'. Anyị nwere ike eleghị anya, mgbe ahụ pụọ ma chefuo banyere ya, dị ka ihe anyị nwere ike ime site na ihere. N'ihi na mgbe ndị ọzọ nwere ike ichefu, anyị ga-echefu anyị onwe anyị na-eme.
FontasThe Zen otú o si emeso Ndinam na adịkwa a uba – e nwere nanị 2 ohere. Ọ bụ chi ma ọ bụ na ọ bụ nkà.
Ọ bụrụ na ọ bụ chi, mgbe ahụ, m nwere unbelievable n'abalị cha cha, ma ọ dịghị mgbe cashed si. Na njedebe ulo ndibọhọ, ka ha na-eme mgbe niile. Etinye ya niile m n'azụ, ka a meme banyere ya, na na ọ ga-dị nnọọ ibu a na-akpa ọchị akụkọ na-agwa na Ogwe. The-acha anụnụ anụnụ Erere.
Ọ bụrụ na ọ bụ nkà, Ihe m na-acha ọbara ọbara Erere. Nāchikọta a obere isi, na-eme ya nile ọzọ. Tinyegharịa ihe m mere na nke mbụ gburugburu – n'ezie, ọ ga-adị mfe na ngwa ngwa na nke abụọ oge gburugburu. nke ahụ bụ, ma ọ bụrụ na atụmatụ bụ n'ezie ụda.
Ọtụtụ ndị bụ ndị na-na-atụfu mbụ ha uba agaghị achọpụta ma ọ bụrụ na ọ bụ chi ma ọ bụ nkà.
M bịara jumping na oke bekee oghere mgbe adịkwa mbụ m dotcom trading uba. Best mkpebi nke ndụ m. My abụọ bịara ọbụna ngwa ngwa karịa ndị nke mbụ, na bụ ọtụtụ ibu – mbụ echekwara iyi miniscule ugbu a.
My naanị ụta na-imefusị 2 ogologo ogbenye afọ na mama ulo tupu ya niile pịrị m na isi – chioma ma ọ bụ nkà, M nwere ike mgbe – gwụla ma m na-agbalị ọzọ na-ahụ. Amama ọ bụ nkà.
gypsytoy Yeah, ọ bụ siri ike maa. Echere m na naanị azịza bụ ịchọta ihe bara uru na akụkụ ndị ọzọ nke ndụ. mmekọrịta, omume ntụrụndụ, enye azụ. E nwere ọtụtụ ụzọ na-agbalị agwọọ gị n'uche mgbe ihe dị ka nke a, M nnọọ na-echegbu onwe m na-adịghị ngwá ọrụ ma ọ bụ uche na-eme otú. Daalụ maka ikwu.
AjaxFC1900 Echere m na m bụ a trading amamihe, a chi, ihe ọ bụla
Echefu banyere akụ, ụgbọ mmiri, hotels etc…na njedebe nke ụbọchị ọ bụ ihe niile banyere na mmetụta, onye obula kwesiri ka eche dị ka na ọ dịkarịa ala otu ugboro ná ndụ…ị nwetara na-eche nnọọ na-eto eto…emekpala ukwuu, na njedebe nke ụbọchị anyị na-na na niile ihu ọma nwụọla, ke akwa atụmatụ ihe ọ dịghị mkpa ka ukwuu ma ọ bụrụ na i mere ma ọ bụ furu efu 5 ọtụtụ nde , na-agwa gị ihe na oké atụmatụ ihe anyị ndụ dịghị mkpa na ihe na, dị ka m kwuru na anyị na-na na niile ama nwụrụ anwụ na agbanyeghị.
Ọ na-gbagwojuru anya, mgbe ụfọdụ, na n'oge gara aga ọ na-eji na-adị mfe… dị ka na-aga agha na ma merie ụwa ma ọ bụ na-a bullet na isi ma ọ bụ nwụọ n'ọgbọ agha…ugbu a, anyị na-adịghị eme ihe ndị ọzọ na, n'ezie, anyị ga-emeso ọdịda nke bụ ụzọ ọnwụ njọ maka ụbụrụ anyị / uche. Ọ bụ ụzọ mfe n'oge ahụ, mgbe anyị ka bụ ndị na-erughị nwere ọgụgụ isi na ndị ọzọ eme ihe ike ike
Cinnamon_Twist M n'ezie-enweghị mmasị n'ebe a mgbagha. Ndị mmadụ gara aga bu incredibly nwere ọgụgụ isi nanị n'ihi na ha adịghị na accumlated ihe ọmụma anyị nwere taa adịghị eme ka ha ime ọhịa. Ị nwere ike ka na-alụ agha ma ọ bụrụ na ị chọrọ dịghị onye a na-akwụsị ị.
Na ndụ nkà ihe ọmụma bụ n'ezie mwute. Ọ bụghị onwe doro anya na n'ihi na ndụ ga-emecha kwụsị ka gị na ị ga-ahụ ya otú efu na-abachaghị uru.
JungleSumTimes M na-eche na e nwere ụfọdụ ụdị nnwere onwe-enweta site na-amata na anyị niile bụ ndị dị nnọọ obere blips na nnukwu ihuenyo. Mgbe ị na-anabata adịghị gị ịdị adị ya n'ezie na-eme ka ị na-ruo nnọọ ịbụ onwe gị na dị ka onye na-achụso ihe na ị hụrụ n'anya kama echegbu onwe mgbe niile banyere otú otu na-ekpe ikpe gị.
Ụmụ okorobịa na-ya ọjọọ otú a n'ihi gị bankroll bụ nnukwu akụkụ nke otú ị na-ele ya anya na kpebisiri ike a ịga nke ọma ná ndụ. E nwere ọtụtụ mma jikoro.
pepe_le_shoe Poker nwere ihe mmewere nke nkà, ma ọ bụrụ na a na ịgba chaa chaa riri ahụ antes elu, ọ ga-agba chaa chaa. O nwere ike igwu egwu uko maka 2, 4, enwere ike 6+ awa, ụbọchị ọbụna, ma ụfọdụ ebe, tupu ọ na-aga n'ụlọ, ọ ga-agba chaa chaa. Ọ ga-enwe na-adịru nwa oge lapse na ịdọ aka ná ntị, ọ ga-, otu ugboro, -aga megide na emegide na nzọ niile na ihe n'ime ogologo Olee, ma ọ bụ asọ kwa ike na ala set mgbe ọ maara miri ala na ọ pụtara na-adọrọ mmasị.
E nwere egosighị mmetụta egwuregwu na-emeri oge nile, ma eleghị anya, ha nwetara nkà, na maths, ma ọ bụ na-agụ ndị mmadụ. Ma ọ dịghị nke ndị a ndị mmadụ na-ezi-agba chaa chaa. -Agba chaa chaa na-aga n'ụlọ na ihe ọ bụla.
Nke ahụ bụ m maka a mgbe. M na-adịghị na-egwu maka ego ọzọ.
SamAiken M na-anaghị 200 BTC, ma m na na na na yiri tilt ọnọdụ dịkarịa ala ugboro abụọ. Ị bụghị onye mbụ na-ọgaranya ngwa ngwa na mgbe ahụ, hapụ gị ego gị niile. Luckily, ị ghara imesị nga dị ka ọtụtụ “-esi bara ọgaranya ngwa ngwa” ndị na-eme.
Dị ka ihe i kwuru, i nwere nnukwu ihe ọmụma gaps banyere mkpa nke diversification na n'ihe ize ndụ-management, ya biko eji oge ụfọdụ na-eme nnyocha na ọ. Ugbu a ị na-kpọrọ BTC na m maara nke a mmetụta nke ọma, ma ọ ga-agabiga.
E nwere a ohere na anyị ga-enwe a bearish ahịa a izu ole na ole ma ọ bụ ọbụna ọnwa, otú i nwere oge iji mee ka obi ala, ịkụziri onwe gị banyere etinye na sonyere anyị mgbe e mesịrị na ọzọ ife. Ị nwere nnọọ ahụmahụ karịa na ihe ọmụma, karịa nkezi kaadị ọṅụ.
Ma ugbu a, akụkụ dị mkpa – ị ka nwere ike wughachi gị Pọtụfoliyo site ọkọ! Ọ ga-ewe ogologo oge, karịa a ọnwa ole na ole, ma i nwere ike ime ka ọ na. emere m ya. Ọtụtụ ndị mere. I nwere ike ime ya, oke.
Na trading bụ mgbe ize ndụ, nrụgide na-adịghị tinye uru ọ bụla na otu ma ọ bụ obodo, ka-etinye na hodling bụ a ukwuu odi mfe ụzọ na-ọgaranya, kama trading. The okenye ị ga-esi, na ihe ize ndụ nchegbu ga-abụ maka gị, ọ bụ ọbụna gbuo gị (e.g. obi nkolopu). Gị mere ha mgbe, ịmụta banyere ihe ize ndụ-management, mgbe na na na na gị dum Pọtụfoliyo, na mgbe ị na-esi ọtụtụ cryptos ọzọ, echefula na rebalance gị Pọtụfoliyo site na-akpụ akpụ ụfọdụ ego n'ime fiat ego, ezigbo ala na ụlọ ma ọ bụ ebuka.
E wezụga etinye, biko echefula na-elekwasị anya na ihe ị chọrọ ime ná ndụ ma e wezụga n'ihi ịbụ a ọgaranya Ihọd na-efe efe jets. Olee otú ị chọrọ inyere ndị mmadụ aka na-eme ka ndị obodo? Na itinye ego gị oge a direction. gị ahụmahụ, ihe ọmụma na aha agaghị apụ n'anya dị ka BTC mere.
Mara ihe na-ejide!
Rakuten ebupụta ya cryptocurrency
na 2016, na Japanes ...
A isi kọmitii na A ...